C/weli Gaas “Federaalismka maanta waa sharciga dalka, hadduu shaqeyn waayo…”
Madaxweynaha Puntland C/weli Maxamed Cali Gaas ayaa ka hadlay arrimaha Dastuurka, Federaalka, qeybsiga deeqaha iyo awooda dalka, isagoo xusay in sanadkii 1991 ay Soomaaliya u bur burtay awooddii oo hal meel iyo hal gacan aheyd.
Waxaa uu ka hadlay dastuurka dalka u yaalla, isagoo ka sheekeeyay heerarkii uu soo maray dastuurka qabyo qoraalka iyo xilligii saxiixayaasha oo uu isaga dalka ka ahaa Ra’iisul Wasaare, isla markaana shir sanadkii 2012 ka dhacay Muqdisho oo ay ka qeyb galeen 825 qof lagu ansixiyay Dastuurkii KMG ahaa.
Madaxweye Gaas ayaa sheegay in Federaalismka maanta uu yahay sharciga dalka, haddii uu shaqeyn waayo ama xumaado laga tashanayo markeeda.
“Federaalismka maanta waa sharciga dalka, hadduu shaqeyn waayo ama nagu xumaado markeeda ka tashaneynaa, dalka Soomaaliya wuxuu u dumay awoodda oo hal meel iyo hal shaqsi gashay, 1991 Janaayo Muqdisho oo caasimaddii dalka ayaa duntay, dalka intiisa kalena wuu dumay, 30 sano kaddib ma sidii ayaa ku laabaneynaa waa maya”ayuu yiri C/weli Gaas.
Waxaa uu sheegay in haddii xataa Xamar lagu kala tago aysan dhib ku dhaceyn Garowe oo aanay dumeyn, isla markaana Puntland ay sideeda u jireyso.
Sidoo kale waxaa uu ka hadlay qeybsiga deeqaha oo uu xusay in si caddaalad ku jirto aan loo qeybin, isagoo tusaale u soo qaatay mashaariicda horumarineed ee dowladda Federaalka deeqda u heshay oo uu xusay in inta u dhaxeysa Afgooye iyo Jowhar lagu koobay sida uu yiri.(Jwhrn)
Halkan hoose ka daawo khudbada Madaxweynaha Puntland